राष्ट्र बैंकले दुई अर्बकाे ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने - नेपालबहस
राष्ट्र बैंकले दुई अर्बकाे ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने
१२ पुष, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार रु दुई अर्ब १० करोड बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने भएको छ । बोलकबोल प्रक्रियाका माध्यमबाट सो परिमाणको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्न लागिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
बैंकका अनुसार रु १० करोड बराबरको ट्रेजरी बिल भने ९१ दिने अवधिका लागि बिक्री गर्न लागिएको हो । सो बिल आगामी चैत १७ गते परिपक्व हुनेछ ।
यस्तै रु दुई अर्ब बराबरको ट्रेजरी बिल भने कूल ३६४ दिन अवधिका लागि बिक्री गर्न लागिएको हो । सो बिल भने २०७८ पुस १३ गते परिपक्व हुनेछ । बैंकले यसअघि पुस ६ गते पनि टे«जरी बिल बिक्री गरेको थियो ।
बजार वृद्धि हुँदा पनि किन भयो मैनवत्ति रातो ? हेरौ आजको बजार विश्लेषण ३९ मिनेट पहिले
डिशहोम रियालिटी टिभीमा ट्यालेन्ट शो ‘कलाको मेला’ आइतबारबाट सुरु ८ घण्टा पहिले
नेपालमा कतै नमनाइने ‘छोरा’ तिहार कर्णालीवासीले यसरी मनाए ३ दिन पहिले
गणेशमान सिंह स्मृति बक्सिङ फागुन तेस्रो सातादेखि २ दिन पहिले
स्याङ्जामा कांग्रेसमा प्रवेशको लहर, आँधीखोलाका सयौं नेकपा कार्यकर्ताद्धारा पार्टी परित्याग ५ दिन पहिले
किन राष्ट्रपतिलाई अनावश्यक विवादमा ल्याउन खोजियो ? ४ हप्ता पहिले
कारको ठक्करबाट बालकको मृत्यु ३ हप्ता पहिले
बालुवाटार जग्गा प्रकरण नाइकेकी पत्नी २ लाख धरौटीमा अदालतबाट रिहा ३ हप्ता पहिले
बालुवाटारमा ओली पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठक सुरु ४ हप्ता पहिले
सर्वोच्चभित्र सुनुवाई, बाहिर बामदेवविरुद्ध कांग्रेस बीपीको विरोध प्रदर्शन ४ महिना पहिले
बेलायतको रिडिङस्थित पार्कमा छुरा प्रहार, तीन जनाको मृत्यु ७ महिना पहिले
नाङ्ग्लो ठटाएर हात्ती तर्साउने बुद्धिभ्रष्ट प्राणी १ महिना पहिले
धौलागिरी अस्पतालमा शरीर जोडिएका शिशु जन्मिए २ महिना पहिले